थेसिस लेख्ने तरिका थाहा नहुँदा कतिपय विद्यार्थी अन्योलमा छन् । नियमित कक्षा नलिएकाले लेख्न तरिका थाहा नहुँदा उनीहरूले वर्षौंसम्म थेसिस पूरा गर्न सक्दैनन् । उनीहरूको समस्या बुझेर शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले थेसिस लेख्ने तरिका यसरी सुझाएका छन् ।पाठ १ – रिसर्च प्रपोजल कसरी तयार पार्ने? थेसिसको प्रपोजल लेख्नेक्रममा केही विद्यार्थी तनावमा देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
यसलाई तनावका रूपमा नलिई निर्माणात्मक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ । वास्तवमै यो कठिन कार्य हो । तर, जब तपाईं आफ्नो प्रपोजलमा सफल हुनुहुन्छ, थेसिसको झन्डै ५० प्रतिशत काम पूरा भएको ठान्दा हुन्छ ।प्रपोजल तयार पार्दा धेरैलाई केमा रिसर्च गर्ने भन्ने टाउको दुखाइ हुन्छ । जुन क्षेत्रमा आफ्नो बलियो पकड छ, त्यसैलाई समात्न सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ । यदि तपाईं माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान पढाउनुहुन्छ भने तपाईंको शीर्षक माध्यमिक विद्यालयको विज्ञानसँग सम्बन्धित समस्यामा आधारित गराउन सके तनाव स्वाट्टै घट्न सक्छ ।
क्वालिटेटिभ गर्नुहुन्छ भने त्यसैलाई अलि परिमार्जन गरेर विज्ञान विषयप्रति विद्यार्थीले आफ्नो धारणा कस्तो बनाएका रहेछन् त भनेर ‘हाउ डु स्टुडेन्टस् पर्सिभ द लर्निङ अफ साइन्स इन सेकेन्डरी स्कुल’ भनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ।आज फेरि टपिककै बारेमा कुरा गरौं । यसअघि हामीले टपिक छान्नेबारे केही भनेका थियौं । सकभर आफ्नो रुचि र लगाव भएको टपिक छान्दा राम्रो भनेर । अर्को एउटा उदाहरण लिउँ है । यदि तपाईं कम साक्षर वा कम शिक्षित मानिसका समूहबारे किन उनीहरू अरूको तुलनामा कमजोर भए भन्ने अनुसन्धानमा रुचि राख्नुहुन्छ भने तपाईंको टपिक के होला ?
Previous एका बिहानै आयो दु:खद खबर ! रहेनन हास्य कलाकार सम्भु थापा”बखते”
Next पौडी खेल्ने क्रममा द’हमा डु’बे:र एकैघरका दुई दाजुभाइको मृ:’त्यु